Washington City Offices hwindo sikirini kugadzira makwapa akasvibirika - China Wuqiang County Huili Washington City Offices
Washington City Offices hwindo chinovhara kugadzira makwapa akasvibirika
Washington City Offices hwindo sikirini kugadzira nama anonziwo Washington City Offices Chinovhara kugadzira Kit, Self Stick Chinovhara Patch, nechidzitiro kugadzira nama, Washington City Offices dzokuongorora chigamba.
Namira kunotsigirwa Washington City Offices makwapa akasvibirika zvinoshandiswa makomba kugadzira uye achichema hwindo sefa kana chidzitiro masuo. No Ezvemutauro kunodiwa. 5 Pack Material: Washington City Offices Color: Charcoal Self ndopinza chinovhara kugadzira nama Inosvika: 3 "Width: 3" kushandiswa kugadzira maburi uye achichema hwindo sefa kana chidzitiro masuo No Ezvemutauro kunodiwa. Carded.
Sei kugadzirisa chidzitiro zvakabvaruka
1: Cheka gomba
Akatema sikweya buri kunhivi misodzi uchishandisa straightedge uye unopinza utility nebanga. Chengeta gomba duku sezvinobvira uye kusiya dzinenge 1/2 in. Kare chidzitiro pedyo simbi puranga.
2: guruu pamusoro chigamba
Cheka chigamba Washington City Offices ugofukidza kuti kuda pamakumbo 1/2 in. Pamusoro mumwe mucheto. Muise wakisi bepa pasi nepahwindo chidzitiro kuchengeta guruu kubva Nokuchengeta workbench. Center chigamba pamusoro gomba, kushandisa bead kuti guruu vakapoteredza gomba, uye kuparadzira guruu kuburikidza chigamba uye hwindo chidzitiro vachishandisa sandarara yemapuranga rutanda.
Kana uri zvokudya pamwe chete Umhutu vava kungotaura nezvekudzoka kumativi musoro wako uye nokuchengeta unomuka usiku hwose, sei pamusoro kugadzirira chidzitiro? Patches vachava zvinooneka uye vanogona kutarira vachitova tacky, saka kana misodzi iri guru kana chidzitiro zviri zvikuru zvinoonekwa nzvimbo, kutsiva yose chidzitiro. Zvikasadaro, maminitsi 20 uye chete achichisonera panguo gomba.
Kana chidzitiro wako Washington City Offices (richafa sokuti jira), kutenga 1/2 ft. Pamusoro Washington City Offices matsva achivhara kubvisa mupumburu panguva Hardware kuchitoro kana musha centre kana kukumbira mashoma cutoffs diki. Uyewo kunhonga kana munhu rabha-inobva guruu kana Super guruu gel. Zvadaro kutevera Photos 1 uye 2. kiyi yakanaka-achitarisa kugadzira wakabata straightedge muchibatirira kuzorwa workbench saka unogona kugadzira cutout yakachena (Photo 1).
Kana uine chinhu aruminiyamu chidzitiro duku gomba, kutenga chigamba Kit panguva Hardware kuchitoro kana musha centre. Zvichaita ane vanoverengeka precut 1-1 / 2-mu. makwapa akasvibirika vane preformed nezvikorekedzo kuti varibatanidze zvakananga chidzitiro.